Bayakhala abadala | News24
Ziinkonde neenkondekazi ezingaphezu kwekhulu ezithe zaqhankqalazela kwisikhululo samapolisa ase Site B ngoLwesihlanu weveki ephelileyo, zityhola abakwantsasane ngokungazikhathaleli iimfuno zazo.
Ezi ngwevu neengwevukazi, neziphuma kwa wadi 91, zityhole amapolisa ngokungazihoyi, kuquka ukuphakama kade xa zine zikhalazo.
Omnye wabaqhankqalazi uMelford Mlatha (onama 69) ukhale ngelithi uqhekezelwe amatyeli amaninzi kunyaka ophelileyo, kwaze kwathatyathwa iimpahla zakhe kuquka umabonakude.
Utyhole ngelithi wavula ityala emapoliseni, kodwa alizange lihambele ndawo, kwaye azange afumane ngxelo ngalo.
U-Mlatha wongeze ngelithi akazange adibane kwa nomcuphi wetyala. “Into endandiyifumana kukugrogriswa ngaba bantwana babendiqhekezele, bemana ukudlula-dlula pha ngasendlini yam,” uchaze watsho uMlatha.
Wongeze ngelithi bafuna umphathi-sikhululo athabathe uxanduva, afake uxinezelelo kubasebenzi ukuze bayeke ukunyotha xa besabela iziganeko zolwaphulo-mthetho.
“Sithi imoto zamapolisa mazahlukane nokulala esithubeni. Mawayeke amapolisa ukufuya imoto ezindlini zawo, sithi thina xa sizifuna kuthiwe azikho okanye ziphelile kodwa zikhona,” utshilo uMlatha.
Wongeza ngelithi ipolisa ngalinye maligoduke ngemoto yalo, okanye likhwele isithuthi sika wonke-wonke.
Umphathi-sikhululo uBrigadiya Mkhuseli Nkwitshi, nothe wamnkela uxwebhu lwezikhalazo, uthembise ngokuphendula kwezi zikhalazo zingaphelanga iintsuku ezisixhenxe, nabazisikelwe ngabaqhankqalazi.
“Ndizakubiza intlanganiso engxamisekileyo kunye nabaququzeleli bale matshi, ukujonga ukuba singazisombulula njani ezinye zezi zikhalazo. Ndiyaqinisekisa ukuba sizakwenza konke okusemandleni ukuba sisebenzisane naye wonke umntu wasekuhlaleni,” utshilo uNkwitshi.
Uceba we wadi uThando Mpengesi uluchaze olu qhankqalazo nje ngelijonge kwizinto ezininzi ezithi ziphazamise ukuhlala, kuquka ukubulawa kwamapolisa, ubundlobongela obuphezulu, uhlukunyezwa kwabantu abangoomama nabantwana.
Usichaze isikhululo samapolisa saseKhayelitsha njengesingenawo amandla okugcina ucwangco kwingingqi yabo.
“Amapolisa ayohluleka ukujongana neSite B iyodwa ngenxa yokuba kukho imbacu ezininzi ezenza ukuba kubenzi emapoliseni ukuwenza ngempumelelo umsebenzi wawo,” utshilo uMpengesi.